Halkee ayay marayaan wadahadalada ONLF iyo Itoobiya? - BBC News Somali
13 Febraayo 2018
Image caption Waftiyada wadahadlaya iyo dhexdhexaadiyeyaasha oo wada taagan
Hirmooge, afhayeenka ONLF oo ay BBC-da wax ka weeydiisay moowqifka jabhadda ee wadahadala ayaa yiri "Barnaamijka siyaasiga ah ee ONLF ayuu ku xusanyahay in khilaafka Ogaadeeniya iyo Itoobiya lagu xaliyo hab wadahadal ah, mana ahan markii ugu horeysay, 1989-kii ayaan wadahadalnay, 1990-kiibaan wada hadalnay".
Warbixin ku saabsan shirweynaha xisbiga haya talada deegaanka Soomaalida
Dhammaan wadahadaladaasi waxa ay ku dhammaadeen guul daro, balse xaqiiqda ah in ay hadda isa soo hor fariisteen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhiga Itoobiya oo dhinac ah iyo waftiga ONLF oo dhinaca kale ah ayaa wadahadalan ka dhigaya kuwa dad badan ay ka filayaan natiijo wanaagsan.
Taageerayaasha jabhadda iyo kuwa kale ayaa baraha bulshada kusoo qoray in horumar laga gaaray shirka, islamarkaasma ay u muuqato in heshiis kama dambeys ah la'isla fahmi doono.
"Dowladda Kenya ayaa u xilsaartay, maadaamaa dhinac ka mid ah uu Af Soomaali ku hadlayay, Itoobiya waxaa matalayay wasaaradda gaashaandhigga, dhanka Kenyana wasiirkii gaashaandhiga xiligaas Yuusuf Xaaji, madaxweynaha hadda jirana isla guddigii hore ayuu dib usoo magacaabay".